Izinzuzo zokusebenzisa i-Police Body Warn Camera | Izixazululo ze-OMG
Izinzuzo zokusebenzisa i-Police Body Warn Camera
Ikhamera yeWarn Warn yaziwa nangokuthi i-BWV (i-Body Worn Video) isebenza njenge-video egqokekayo, umsindo, noma uhlelo lokuqoshwa kwezithombe olwenzelwe ezikhundleni zamaphoyisa. Uhlobo olunjalo lwamakhamera lunokusetshenziswa okungafaniyo kanye nemiklamo, esetshenziswa ngokuhlukile njengengxenye yemishini yamaphoyisa. Ngaphandle kokusetshenziswa kwamaphoyisa, la makhamera asetshenziswa nakwezezimboni ezahlukahlukene njengokuhweba, ezempilo, ukusetshenziswa kwezokwelapha, ukusetshenziswa kwezempi, izakhamuzi nazo zingasebenzisa amakhamera agqokile, nobuntatheli. Umbiko weNascent ukhombisa ubufakazi obuxubile ngomthelela wamakhamera agqamile ekusebenziseni amandla imiphakathi nokuthembela kwabomthetho emaphoyiseni.
Ama-BWC aklanyelwe ngokukhethekile ukuba afakwe kwesinye sezitho zomzimba ezintathu, njengethofu, isigqoko, noma izibuko. Amanye amakhamera eza nezici zokusakazwa bukhoma, kanti ezinye zigxile kwisitoreji sendawo esifana ne-Digital Voice Recorder. Izinhlangano eziningi, kubandakanya ne-Evaluation Center neNational Criminal Justice Technology Research (NJTR) zenze ucwaningo oluningi kumakhamera omzimba ukusiza izinhlangano ekuthengeni okungcono kwazo. Kodwa-ke, lolu cwaningo luchaza i-Optics yedivayisi, ukusebenza kwe-GPS, umsindo nezinye izigaba.
Lawa makhamera asetshenziswa emikhakheni ehlukene, futhi amagama awo alandelayo:
Ama-body Worn Camera aklanyelwe ngokukhethekile amapholisa neminye imigwaqo ukuze kugcinwe ukuthula kulo lonke idolobha noma emhlabeni wonke. Kodwa-ke, lawa makhamera enzelwe ukuthuthukisa ukusebenzisana phakathi kwezakhamuzi namaphoyisa. Ngakho-ke, isizukulwane sokuqala samakhamera amasha agqoke umzimba wamaphoyisa sakhishwa sizungeze i-2005 e-UK. Kodwa-ke, kulandelwa ukusuka ku-2014 kuya phambili ukufakwa kwesilinganiso esikhulu e-US ukukhulisa ukuziphendulela kwamaphoyisa nokwenza izinto obala. Ngemuva kwalokhu, amanye amazwe amaningi alandele ezinyathelweni ezifanayo futhi azibandakanya nawo ekuqhubekeni kwezinyathelo. Izifundo zakuqala kakhulu zibonisa umthelela omuhle, kepha izimpendulo zinezibuyekezo ezixubile. Umphumela ukhonjiswe eminye imibiko eyehlukene ngokuya ngomongo wendawo nezinkombandlela zamakhamera womzimba. Izingqinamba eziningi zibandakanya:
Womabili la makhamera agqokwa ngomzimba nangezigqoko asetshenziswa enhlanganweni yezempi. Kodwa-ke, amavidiyo angagcinwa endaweni yangakini noma asakazwa bukhoma emuva esikhungweni sama-oda noma endaweni engaphandle kwempi.
Nazi ezinye izinzuzo zamakhamera wePhoyisa Womzimba-Worn ongathanda ukuwafunda
Ngokusho kwamaphoyisa asebenzisa la makhamera athi adala ukuziphendulela nokusobala obala ukuze kuncishiswe udlame olwa namaphoyisa. Ngaphezu kwalokho, baphawule ukuthi amakhamera omzimba anikeza ubufakazi abadingayo ukufakazela noma ahlanze izinsolo zokungaziphathi kahle futhi ayithuluzi elihle lokuqeqeshwa kwamaphoyisa futhi ahlinzeka nokuvikela nokusekelwa emphakathini. Ngokuphikisana namandla amaphoyisa asebenzisa amakhamera omzimba athi amakhamera agqokwa awathinti kabi empilweni nasengqondweni yabasebenzisi ngokubanikeza ngalolo hlobo lwemishini nengcindezi yokuqoshwa kwevidiyo njalo. Masifike ephuzwini futhi sixoxe ngezinzuzo zamakhamera agqoke umzimba wamaphoyisa.
Ngeshwa, abantu emhlabeni jikelele baziphatha ngendlela ehlukile lapho bazi ukuthi bayathelwa. Ngakho-ke, amakhamera endikimba yamaphoyisa angakhuthaza isimilo sokuziphatha kwamaphoyisa ngaphambi komphakathi futhi lo mthetho nawo uyasetshenziswa emphakathini, okuholela ekwehleleni kwezinga lobugebengu, okwenza ukusetshenziswa kwezigameko zokuphoqelela kanye nokukhusela abantu abahlasela izisebenzi ezingekho emthethweni. Ngokusho kocwaningo eRialto, isilinganiso sobugebengu i-50% sincipha ngenxa yamakhamera agqokwa ngomzimba wamaphoyisa ngesikhathi samakhamera okuqulwa kwamaphoyisa okokuqala. Ngokumangazayo, izikhalazo ezibhekene nezikhulu zivele ngokuzenzakalelayo zisuka ku-28 zaya kwi-3 ngonyaka wokuqulwa kwecala.
Ukuvikelwa Kwamaphoyisa Amaphoyisa Ekuqanjweni Amanga Nokungaziphathi kahle
Njengoba ngishilo ngenhla, i-Police Body Won Camera (ngamafuphi i-PBWC) ihlinzeka bobabili ubufakazi bomsindo nevidiyo abangaqinisekisa ukuthi yikuphi okungahambanga kahle ngesikhathi esinikeziwe. Uhlobo olunjalo lwezobuchwepheshe luwusizo kuwo womabili amaqembu afana namaPhoyisa Omphakathi kanye noMphakathi. Noma imaphi amaphoyisa angabheka ukuthi usebenzisa lobu buchwepheshe oziphathe kabi kunoma yisiphi isakhamuzi, kuyilapho kuzoboshwa noma ngubani ovela emphakathini ozama ukwenza izinsolo zamanga kunoma yimuphi umsebenzi wamaphoyisa. Sikubheka njengenye yezinzuzo ezinhle kakhulu ngoba kuphephile kuwo womabili amaqembu. Amaphoyisa ambalwa kulawo mazwe lapho lobu buchwepheshe butholakala khona ajezisa amaphoyisa kanye nomphakathi ngenxa yokuziphatha okungalungile.
Ithuluzi elihle kakhulu lokufunda futhi unokuxhaswa okuhle okuvela kuMphakathi
Ngemuva kwezinzuzo ezimbili, kukhona okwesithathu lapho ividiyo erekhodwe kusuka kumakhamera we-Police Body-Worn Amakhamera angasetshenziselwa ukuqeqesha amaphoyisa asekhona nalawa amasha. Ngakho-ke, uMnyango Wamaphoyisa aseMiami ubelokhu eqala ukusebenzisa lobu buchwepheshe futhi amemezele ingxenye yemishini yamaphoyisa kusukela nge2012. Ngenxa nje yokuthi unamakhamera agqoke, abantu bazizwa bephephe kakhulu, futhi nokuziphatha kwamaphoyisa sekuguqukile ngokuphelele emphakathini. Manje, bakhuluma ngemikhuba emihle nangendlela enhle kakhulu. Namuhla, uhlu olubanzi lwamakhamera we-Body Warn luyatholakala, kufaka phakathi:
I-Mini WIFI GPS / 3G / 4G Body Worn Camera
Ukuqopha Ikhamera Yomzimba Ozelwe
Ikhamera Yomzimba Yesekeli ye-SD Esekelwa
Ikhamera evikelekile ye-Mini Body Worn nge-Encryption + LCD
Zonke lezi zingamakhamera omzimba athandekayo asetshenziselwa ukuphepha okungaphezu kokuvamile, futhi uma ufuna ukuba nekhamera enjalo ungavakashela omg-solutions.com. Ungathola noma yimuphi umkhiqizo wabo ngenani elifanele. Yize isetshenziswa yinhlangano, izakhamizi nazo ziyavunyelwa ukuba nayo kube ukuphepha kwazo. Njengoba ngishilo ngenhla, ayikho imibiko engemihle ngokuya ngalezi zinceku zomzimba ezigqokile, kodwa ngandlela thile kuzothinta impilo yakho engokomzimba noma eyengqondo. Emhlabeni, yonke into inezinzuzo nobubi bobabili, futhi uma silandela umthetho-ke kuyaqinisekiswa ukuthi Amakhamera Wendikimba Yomzimba Amaphoyisa nawo anezinzuzo ezithile. Ngakho-ke nawu uhlu olusheshayo lokungathandeki (ama-cons) ongalwazi.
Lawa makhamera awethembekile futhi abiza kakhulu
Hlasela ubumfihlo bomphakathi, udalule izisulu, ubudlelwano obulimaze ubudlelwane bomphakathi namaphoyisa
Kusetshenziswa Amakhamera, ukuphepha kwamaphoyisa kusengozini ngaso sonke isikhathi.
Izinzuzo zokusebenzisa i-Police Body Warn Camera igcine ukuguqulwa: Septhemba 26th, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3749 Ukubuka kwe-1 Namuhla